Mooshinka Dacwadda Trump:- Jamhuuriyiinta oo doonaya in dacwadda dib loo dhigo ilaa February | Gaaroodi News
January 22, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Donald Trump ayaa ka tegay Washington saacado kahor caleema saarka Joe Biden
Jamhuuriyiinta Aqalka Sare ee Mareykanka ayaa ka codsanaya Dimquraaddiyiinta inay ilaa February dib u dhigaan dacwad ku soo oogidda madaxweynihii hore Donald Trump.
Waxay ku doodayaan in taas ay waqti dheeraad ah siin doonto Mr Trump si uu is difaacid isugu diyaariyo. Waxaa lagu eedeynayaa kicin, kaddib markii taageerayaashiisa ay bishii la soo dhaafay galeen dhismaha Capitol.
Dimuqraaddiyiinta Aqalka Wakiillada ayaa diyaar u ah inay dacwadda ku wareejiyaan Aqalka Sare.
Mr Trump ayaa u duulay Florida iyadoo muddo xileedkiisa uu dhammaaday Arbacadii, isagoo aan ka qeyb gelin caleema saarka Joe Biden.
Lixdii January, madaxweynihii hore ayaa dad ku dibad baxayay meel u dhow Aqalka Cad u sheegay in “si nabad ah oo waddaninimo” ku dheehan tahay loo maqlo codkooda xilli ay isku diyaarinayeen inay isu soo baxyo ka sameeyaan dhismaha US Capitol. Wuxuu sidoo kale u sheegay inay “si xun u dagaallamaan”.
Dinbadbaxyada ayaa fowdo isku beddelay iyadoo ay koox si xoog ah ku galeen dhismaha Kongareeska, halkaas oo ay xildhibaannadu ku guda jireen ansixinta guusha Mr Biden.
Afar dibadbaxayaal ah iyo sarkaal booliiska Capitol ka tirsanaa ayaa ku dhintay dhacdadaas.
Sawirrada weerarka US Capitol ayaa ka fajaciyay dunida
Toddobaad kaddib, Mr Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka ee labo jeer xil ka qaadis laga gudbiyo. Dacwad ku soo oogiddiisa ayaa noqoneysa tii ugu horreysay ee laga gudbiyo madaxweyne xilka ka tegay.
Arrimo ku saabsan xil ka qaadista:
Waa maxay ka gudbinta xil ka qaadis? Ka gudbinta xil ka qaadis waa marka madaxweyne talada haya lagu soo oogo debiyo. Xaaladdan, madaxweynihii hore waxaa lagu eedeynayaa kicin dadweyne
Maxaa hore u dhacay? Aqalka Wakiillada ayaa 13-kii January u codeeyay in Mr Trump xil ka qaadis laga gudbiyo, taas oo waddada u xaareysa in Aqalka Sare uu la wareego kiiska – balse dacwad ku soo oogidda lama guda geli karin kahor inta uusan xafiiska ka tegin 20-kii January
Maxay Jamhuuriyiintu codsanayaan?
Baaq uu shalay u diray sanatarrada Jamhuuriga, ayaa hoggaamiyaha sanatarrada laa tirada badan yahay Mitch McConnell wuxuu sheegay in Dimuqraaddiyinta Aqalka uu ka codsaday inay dib u dhigaan dacwadda.
Haddii dib loo dhigo, Mr Trump wuxuu heysan doonaa labo toddobaad – ilaa 11 February – si uu u soo gudbiyo is difaaciddiisa kahor maxkamadeynta. Doodaha ayaa la filayaa inay bilowdaan bartamaha February.
Jamhuuriyiinta, oo laga soo bilaabo Arbacadii aan aqlabiyad ku lahayn Aqalka Sare, ayaa u baahan in hoggaamiyaha aqlabiyadda Dimuqraaddiyiinta, Chuck Schumer, uu oggolaado ra’yigooda
Dimuqraaddiyiintu ma oggolaan doonaan codsigaas?
Xafiiska Mr Schumer weli ma soo saarin warbixin ku saabsan soo jeedinta Mr McConnell.
Afhayeenka Aqalka Nancy Pelosi ayaa diidday inay weriyeyaasha uga jawaabto su’aan shalay laga weydiiyay xilliga ay gudbin doonto dacwadda.
Balse waxay sheegtay in Mr Trump uusan u qalmin in la cafiyo sababo la xiriira inuu xilka ka tegay.
Sanatarka Chris Coons ayaa sheegay in laga yaabo in Dimuqraaddiyiinta ay oggolaadaan dib u dhigista maxkamadeynta haddii ay Jamhuuriyiintu gacan ka geystaan ansixinta golaha wasiirrada Mr Biden.
Falanqeyn: Caqabad la soo deristay Dimquraaddiyiinta
Soo jeedinta Mitch McConnell ee ah in dib loo dhigo dacwad ku soo oogidda Donald Trump waxay u muuqataa mid kala qeybin doonta Dimuqraaddiyiinta. Taasina waa sababta uu McConnell u soo jeediyay.
Qaar ka mid ah Dimuqraaddiyiinta way soo dhoweyn doonaan in labo toddobaad dib loo dhigo, taas oo Aqalka Sare fursad u siin doonta waqti ay ku ansixiyaan golaha wasiirrada madaxweynaha. Kahor caleema saarkiisa, Joe Biden wuxuu walaac ka muujiyay inuusan si degdeg ah usoo dhammeystiri karin shaqaalaha maamulkiisa wuxuuna Aqalka Sare u soo jeediyay inay waqtigooda qeyb ka mid ah ka shaqeeyan dacwad soo oogidda iyagoo shaqooyinkooda kalena wata.
Dimuqraaddiyiinta kale ayaa daneynaya in la dedejiyo dacwad ku soo oogidda. Waxay aaminsan yihiin in dib u dhigidda uu yareyn doono cadaadiska Jamhuuriyiinta ka saaran inay u codeeyaan in Trump uusan mar dambe xil qaban, maaddaama rabshadihii 6-dii January ay ka ba’ayso xusuusta.
Inkastoo Mr McConnell uusan haatan xukumin Aqalka Sare, wuxuu muujinayaa in weli hayo khiddado shaqeyn kara.
Yaa difaaci doona Trump?
Mr Trump ayaa shaqaaleysiiyay qareen fadhigiisu yahay Koofurta Carolina oo lagu magacaabo Butch Bowers si uu wakiil uga noqdo dacwaddiisa xil ka qaadista ee Aqalka Sare, sida laga soo xigtay Sanatar Lindsey Graham.
Sida laga soo xigtay bartiisa Internet-ka, Mr Bowers wuxuu la taliye gaar ah ka ahaa arrimaha codeynta ee Waaxda Caddaaladda Mareykanka, markii uu xilka hayay George W Bush.
Wuxuu sidoo kale la taliye u ahaa labo barasaab hore oo Koofura Carolina ah, Nikki Haley iyo Mark Sanford